ကျွန်ုပ်၏ဖုန်စုပ်စက် G9၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း | Gadget သတင်းများ
ဒီနေ့မင်းတို့အကြောင်းပြောရတာပျော်တယ် နောက်ဆုံးပေါ်အသံမြည်သည့် Xiaomi ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအနက်မှတစ်ခု။ ဤအချိန်အခါတွင် Xiaomi မှမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှပါ ၀ င်ခြင်းမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည် အဆိုပါ Mi မိသားစုပိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း။ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအိမ်အသုံးအဆောင်များအတွင်း၊ ဤနေ့ရက်ကာလကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည် Mi Vacuum Cleaner G9 လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်.
တစ် ဦး ကလေဟာနယ်သန့်စင် အများကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ရလဒ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေး အားလုံးသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးအောင်။ သင်လိုချင်သည်ဆိုပါက သငျသညျထိန်းချုပ်မှုအတွက်တ ဦး တည်းနေသောအတူဖုန်စုပ်စက်, Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်မျက်နှာပြင်အတွက်စုပ်ယူနိုင်စွမ်း အားလုံးလိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
1 အကြှနျုပျ၏ဖုန်စုပ်စက် G9 ပါဝါနှင့်ထိန်းချုပ်မှု
2 Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ကို Unboxing လုပ်သည်
3 Mi Vacuum Cleaner G9 ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ergonomics
4 Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ၏အင်္ဂါရပ်များ
5 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဇယား Mi Vacuum Cleaner G9
အကြှနျုပျ၏ဖုန်စုပ်စက် G9 ပါဝါနှင့်ထိန်းချုပ်မှု
တစ်ခါတစ်ရံအိမ်သန့်ရှင်းရေးသည်များစွာသောလူများအတွက်စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းရေးကိုစိတ်စွဲလမ်းမထားသူများအတွက် \_ t အိမ်တွင်သန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကောင်းသောကိရိယာများရှိသည် အရေးကြီးတဲ့အရာ Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ဖုန်စုပ်စက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပုံစံဖြစ်အောင်သန့်ရှင်းသည်။ မင်းဒါကိုလိုအပ်လား သင်၏ Mi Vacuum Cleaner G9 ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
ထိန်းချုပ်ရန်လေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တ ဦး တည်းလက်နှင့်အတူချောမွေ့စွာကိုင်တွယ်။ ဒါ့အပြင်အိမ်မှာဘယ်နေရာ၊ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသုံးလို့ရအောင်စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးအဆောင်အမြောက်အများကိုပေးသောလေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေးစက်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့အများစုသည်အသုံးမ ၀ င်ဘဲပျောက်ဆုံးနေသည်အထိဖြစ်လေ့ရှိသည်။ Xiaomi သည်ကောင်းစွာပါဝင်သည် အသုံးအဆောင်အနည်းငယ်နှင့် 100% အသုံးဝင်သည် မည်သည့်အခြေအနေများအတွက်။
Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ကို Unboxing လုပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဖုန်စုပ်စက်များတွင်ရှာတွေ့နိုင်သောအချို့သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများမလိုအပ်ဘဲမှတ်ချက်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုသင့်ကိုပြောပြရမည့်အချိန်ဖြစ်သည် ငါတို့သေတ္တာထဲမှာရှာတွေ့သောအရာကို Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ဖုန်စုပ်စက် ပထမအချက်ကသေတ္တာဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုကြီးလာတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာပါတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတချို့ကရှင်းပြတယ်။
ငါတို့ရှာတယ် အဆိုပါဖုန်စုပ်စက်၏ခန္ဓာကိုယ်။ တစ်ခုရှိသည် သင့်လျော်သောအရွယ်အစား တစ်လက်ခွဲစိတ်မှုအတွက်ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးလံသော။ အကယ်၍ ၎င်းကိုဖွင့်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြင့်သိမ်းဆည်းပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လေဟာနယ်သန့်ရှင်းစက်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်လက်ချောင်းများ၏ရှေ့တွင်ရှိသည့်ခလုတ်တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အများဆုံး voluminous ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ် ကျနော်တို့မြို့ရိုးမှဝက်အူနိုင် bracket က ဒါမှမဟုတ်ဗီရို၏တံခါးနားမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့မသုံးသောအခါ Mi Vacuum Cleaner G9 မှထွက်ခွာနိုင်သည်။ ၎င်းကို plug ကိုအနီးတွင်ထားပါက၎င်းကို support တွင်ထားသောအခါ၎င်းသည်အားသွင်းနိုင်သည်။
ငါတို့မှာaကျဉ်းသောဖြီးဥပမာအားဖြင့်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးတွင်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ကားကြမ်းခင်းဖျာပေါ်တွင်။ Y ပိုကြီးတဲ့ဖြီး ကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်ကော်ဇောများအတွက်ပို။ ဒီပိုကြီးတဲ့ဖြီးဟာကွေးကောက်စရာမလိုဘဲကြမ်းပြင်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်ထားပေးမယ့် extension tube နဲ့ကိုက်ညီတယ်။
ငါတို့သည်လည်းတစ် ဦး ရှာပါ ပိုမိုတင်းကျပ်သောဒေသများသို့လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် extension ကိုပြွန်နှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်။ နှင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ် ဦး သေးငယ်တဲ့ဖြီး အဆုံး၌အမှားများကို ပို၍ ခက်ခဲအောင်အနည်းငယ်ပိုခက်ခဲအောင်ဆေးကြောရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့လည်းရှိသည် cable ကိုအားသွင်းနေစဉ် လျှပ်စစ်ဖုန်နှင့်ဖုန်စုပ်စက်ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်။
ယခု Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ကိုရယူပါလူတိုင်းလိုချင်သည့်ဖုန်စုပ်စက်။
Mi Vacuum Cleaner G9 ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ergonomics
Xiaomi အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအမြဲပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ရှိပြီးသားကုမ္ပဏီတစ်ခု မည်သည့်ကိရိယာပေါ်တွင်မဆိုမှတ်မိနိုင်သောဒီဇိုင်းလိုင်း။ သူ၏စတိုင်သည်ရိုးရှင်းသောလိုင်းများ၊ အလင်းရောင် (များသောအားဖြင့်အဖြူရောင်) နှင့်သတိမပြုမိလောက်သောလိုဂိုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ဖုန်စုပ်စက်သည်ဤအရာအားလုံး၏ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဖုန်စုပ်စက်၏ကိုယ်ထည်ကိုကြည့်ပါက၎င်းတွင်ရှိသည် လက်တစ်ချောင်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်ဒီဇိုင်းပုံစံညာဘက်၊ ဘယ်ဘက်အရေးမပါ။ ကျနော်တို့ရှိသည် enabled အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်ကဖမ်းဆုပ် အဆိုပါစုတ်ယူခြင်းကိုသက်ဝင်ဖို့အဆင်ပြေခလုတ်.
အောက်ခြေမှာငါတို့ရှာပါ ဘက်ထရီ, အဲ့ဒါဘာလဲ အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည် ရိုးရိုးလေးနှိပ်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ ဘက်ထရီယိုယွင်းပျက်စီးသွားလျှင်သို့မဟုတ်အားသွင်းနိုင်စွမ်းလျော့ကျသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ငါတို့အဲဒါကိုအစားထိုးလို့ရတယ် နှင့်ကျန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကျန်ရှိနေသေးသောဆက်လက်အသုံးပြုပါ။
ထဲမှာ နောက်ဘက် ဒါကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီးငါတို့လက်မနဲ့ကိုင်လို့ရတယ် စုတ်ယူခြင်းပါဝါထိန်းချုပ်မှု။ switch ကိုနေရာချဖို့ဖြစ်နိုင်တယ် သုံးကွဲပြားခြားနားသောစုတ်ယူခြင်းအင်အားကြီး။ သိ အများဆုံးပါဝါ 120 ဖြစ်ပါတယ် တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကော်ဇောဖုန်စုပ်စက်သည်အလွန်အစွမ်းထက်။ မသက်မသာဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်လုံးဝကပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး ကျွန်တော်ဖုန်စုပ်စက်၏ကိုယ်ထည်၏ MI တံဆိပ်။ အလယ်ဗဟိုတွင်မော်တာရှိပြီး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိမ္မော်ရောင်စစ်ထုတ်သည့်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုတွေ့နိုင်သည် ၀.၆ လီတာတိုင်ကီ။ ဖုန်စုပ်စက်၏အဖြူရောင်သည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်လျင်မြန်စွာညစ်ပတ်လာပြီးအစွန်းအထင်းများကိုချက်ချင်းသတိပြုမိနိုင်သည်။ ကျန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာလည်းဖြူစင်အရောင်တောက်ပပြီးအရောင်ခြယ်ထားသည့်လိမ္မော်ရောင်အသေးစိတ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ မှလွဲ သံမဏိအရောင်ရှိခြင်းပြွန်.
Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ၏အင်္ဂါရပ်များ
Xiaomi ရဲ့နာမည်ကများသောအားဖြင့်ဆက်စပ်နေပါတယ် ကောင်းသောစျေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်။ ဤရွေ့ကား, ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့ "တူညီသော" ကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောခဲ့ပြီးအရာတစ်ခုခုကိုနီးပါးနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာ။ ဖုန်စုပ်စက်၏ဖြစ်ရပ်သည်ခြွင်းချက်မရှိပါ အရည်အသွေးကောင်းဖုန်စုပ်စက်သည်ငါတို့အတွက်နည်းပါးသည် အလားတူအကျိုးကျေးဇူးများကိုအခြားသူများကိုကုန်ကျသောအရာကို၏။ ဒီထက်ပိုသောက်မပေးပါနဲ့ ယခု Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 မှာယူပါ
ဖုန်စုပ်စက်ဝယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရသောပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များအနက်မှတစ်ခုမှာဖြစ်သည် စုတ်ယူခြင်းပါဝါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Mi Vacuum Cleaner G9 ဖုန်စုပ်စက်သည်စွမ်းအားကို အခြေခံ၍ စုတ်ယူခြင်းစနစ်သုံးမျိုးရှိသည်။ အများဆုံးစုတ်ယူခြင်းပါဝါဖြစ်ခြင်း လေထု၏ 120 watts က။ ငါတို့ပြောပြီးပြီ တစ်အိမ်လုံးကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်တယ်။ ကော်ဇောတွေတောင် နိမ့်ဆုံးအဆင့်နှင့်အတူperfectlyုံလုံလောက်သော။
Mi ဖုန်စုပ်စက် G9 ဖုန်စုပ်စက်ကိုဒါခေါ်တပ်ဆင်ထားသည် ဆိုင်ကလုန်းနည်းပညာ။ ဒီစနစ်အပေါ်အခြေခံသည် ဆိုင်ကလုန်း ၁၂ လုံး အိမ်တွင်းလေကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်ကူညီသည် 99,97% filtration မှုနှုန်း တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည် filter နှင့် motor ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုရှောင်ရှားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်များ၏စွမ်းဆောင်ရည် 100.000 rpm မှာလှည့် aspirator နှင့်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏အသုံးဝင်သောဘဝတိုးပွားလာသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၎င်းသည် Mi Vacuum Cleaner G9 ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တစ် ဦး ကြာချိန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် စစ်ဆင်ရေးအတွင်းမိနစ် 60 အထိ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောစုတ်ယူခြင်းစွမ်းအားအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့မှသာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်ပိုမိုနည်းပါးလာလိမ့်မည်။ အများဆုံးပါ ၀ င်သည့်ပမာဏကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဘက်ထရီသည် ၁၀ မိနစ်ထက်မပိုပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိသည်မှာအနည်းဆုံး power level ဖြင့်အခြေအနေအားလုံးနီးပါးတွင်လုံလောက်မှုမရှိပေ။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဇယား Mi Vacuum Cleaner G9
ပုံစံ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်စုပ်စက် G9
စွမ်းအား AW 120
စွမ်းရည် 0.6 လီတာ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မိနစ် ၂၀ အထိ
ဖြုတ်။ ရသောဘက်ထရီ SI
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 5.45 ကီလိုဂရမ်
ရှုထောင့် X ကိုက x 75.2 32.9 13.2 စင်တီမီတာ
စြေး 179.00 €
ဝယ်ယူ link ကို ကျွန်ုပ်၏ဖုန်စုပ်စက် G9
။ Per တ ဦး တည်းလက်နှင့်အတူလည်ပတ်.
အင်္ဂါရပ်တွေ စုတ်ယူခြင်းပါဝါသုံး Modes သာ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များအတွက်။
တစ် ဦး တည်းလက်အသုံးပြုမှု
El အဖြူရောင် အလွယ်တကူထွက်လှည့် ညစ်ပတ်တယ်.
ရလဒ် အနည်းငယ်လေးလံတယ် ငါတို့ခဏတစ်သုံးပြီးပြီအခါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » အကြှနျုပျ၏ဖုန်စုပ်စက် G9, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း
Realme GT၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Realme အသစ်အားမြင့်မားသောအကွာအဝေးတွင်နေရာချရန်ဆန်းစစ်သည်